Ukuhamba e-United States | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | | E-USA
I-United States izwe elikhulu elixhumeke kahle ngaphakathi ngezindlela ezahlukahlukene zokuhamba ezifana nesitimela, indiza, imoto nebhasi.
Inethiwekhi yezokuthutha yase-US isebenza kahle kakhulu ngokwemigomo ejwayelekile futhi ikuvumela ukuthi uhambe ezweni lonke ngokunethezeka futhi ngokushesha. Uma uhlela uhambo oluya e-United States futhi ufuna ukwazi ukuthi ungasuka kanjani ogwini uye ogwini, ungaphuthelwa le ndatshana lapho sichaza khona yiziphi izindlela zokuhamba e-United States.
1.1 Uzohamba nini ngendiza e-United States?
1.2 Izindiza ongahamba nazo
2.1 Kuthatha ini ukushayela e-United States?
2.2 Yini okudingeka ukwazi ukuyishayela e-United States?
3 Izinto zokuhamba zomphakathi e-United States
3.2 Zinjani izitimela e-United States?
3.3 Yikuphi ukuhamba okufanele kwenziwe ngesitimela e-United States?
3.5 Yiziphi izinkampani ezinkulu zamabhasi?
Indiza iyindlela elula kakhulu yezokuthutha ukuhamba ezweni lisuka kwesinye isimo liye kwesinye ngoba inethiwekhi yezindiza kazwelonke ibanzi futhi ithembekile ngezinkulungwane zezindiza zansuku zonke, izindiza eziningi kanye namakhulu ezikhumulo zezindiza. Iningi lamadolobha amakhulu anezindiza okungenani eyodwa enezindiza eziqondile nokuxhumana okutholakalayo.
Izwe likhulu kakhulu ngakho-ke uma ufika lapho ufuna ukuhamba usuka ogwini uye ogwini ngesikhathi esifushane kakhulu, kungcono ukuthatha indiza njengoba uhambo luzokuthatha ngaphansi kwamahora ayisithupha uma kuqhathaniswa nohambo lwezinsuku ezimbalwa olubandakanya lokho ukuhamba ngesitimela noma ngemoto.
Uzohamba nini ngendiza e-United States?
Uma ufuna ukonga imali ethile ngamathikithi akho endiza, into engcono ongayenza ukuhlela uhambo lwakho kusengaphambili. Esikhathini esedlule, izindiza bezizama ukususa izihlalo ezeqile ngomzuzu wokugcina, ngakho-ke bekufanele ulinde isikhathi eside ukuthola amathikithi endiza ashibhile. Kodwa-ke, namuhla isimo sishintshile futhi kunezindiza ezindiza kakhulu ezihlinzeka abahambi ngamanani angcono.
Ngezikhathi ezithile ezifana nekhefu lentwasahlobo, ihlobo noma usuku olwandulela amaholidi namaholide asebhange, ukulinda kuze kube usuku lokugcina ukuthola amathikithi ezindiza kungabiza ngoba kuyisizini ephezulu futhi ukuhamba ngendiza e-United States kubiza kakhulu. Uma unethuba lokuhambela e-United States ngenkathi ephansi, yiyona ebaluleke kakhulu ngoba amathikithi endiza ashibhile. Kuyafana nokuhamba ngezinsuku zesonto esikhundleni sezimpelasonto. Ngale ndlela uzokonga imali eningi.
Izindiza ongahamba nazo
Ezinye zezindiza zikazwelonke ezisebenza e-United States yilezi: American Airlines, Delta Air, United Airlines, US Airways, Skywest Airlines, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines noma iVirgin America, phakathi kwezinye.
Zonke izifundazwe zezwe zinenqwaba yezikhumulo zezindiza ezenza izindiza zansuku zonke ziye emadolobheni ahlukene. Eqinisweni, i-United States inezikhumulo zezindiza zasekhaya ezingama-375.
Lapho ujikeleza e-United States useholidini, abahambi abaningi bakhetha imoto ngoba ingaba yinto ejabulisayo impela. Futhi yilokho olunye lohambo lwemigwaqo oludume kakhulu ezweni yiRoute 66 eyaziwa nangokuthi "umgwaqo omkhulu e-United States."
Cishe ngamakhilomitha angama-4.000 ubude, uMzila 66 unqamula izwe usuka empumalanga uye entshonalanga ezifundazweni eziyisishiyagalombili (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona naseCalifornia) usuka eChicago uyophela eLos Angeles. Ukwenza umzila ngemoto noma ngesithuthuthu wuhambo lwamaphupho kubantu abaningi. Noma kunjalo, Ukuhamba uzungeze i-United States ngemoto kumele wazi ukuthi ungashayela kanjani lapho ngoba umthetho wayo ungahle uhluke kowezwe lakini.
Kuthatha ini ukushayela e-United States?
Uma uhamba njengesivakashi, ezifundazweni eziningi uzodinga ilayisense lokushayela lamazwe omhlaba. Mhlawumbe uma uyoqasha imoto ngeke bayicele kodwa ukuyithatha akubuhlungu ngoba kulula ukuyithola.
Isibonelo, esimweni seSpain ukuyithola kuzodingeka ube nelayisense elifanele lokushayela futhi inqubo ingenziwa ngokushesha online. Konke okudingayo yi-DNI ye-elekthronikhi, gcwalisa ifomu ukucela imvume bese ukhokha imali Ngemuva kwezinsuku ezimbili ungayilanda kunoma yiliphi ihhovisi lezemigwaqo elethula i-ID yakho ukuze uzikhombe nesithombe sombala wamanje esingu-32 x 26 mm. Uma selikhishiwe, ilayisense yokushayela yamazwe omhlaba iba nesikhathi sokusebenza sonyaka owodwa.
Khumbula ukuthi ukuqasha imoto e-United States ubuncane beminyaka edingekayo yiminyaka engama-21, yize kwezinye izifundazwe kungaba yiminyaka engama-25.
Yini okudingeka ukwazi ukuyishayela e-United States?
Yize uyizwe elinesiko lama-Anglo-Saxon, e-United States ushayela ngakwesokudla, uhlangothi olufanayo lomgwaqo njengasemazweni amaningi aseYurophu naseSpain. Kodwa-ke, kufanele sikhumbule ukuthi izwe ngalinye lingaba nemithetho ehlukile yomgwaqo. Ngakho-ke, Ngaphambi kokuba uqale ukushayela, kufanele wazi ngezimpawu zomgwaqo nemikhawulo yejubane ezifundeni ozozihambela.
Ngakolunye uhlangothi, i-United States izwe elinezindawo ezinkulu zomhlaba omncane owakhiwe lapho kubusa imvelo yasendle, ukuze kuthi uma ungayazi indawo leyo, kube lula kuwe ukuthi ulahleke. Ukugwema lokhu, uma uzoqasha imoto e-United States, qiniseka ukuthi uletha iGPS evuselele amamephu emigwaqo.
Izinto zokuhamba zomphakathi e-United States
Enye indlela yokuzungeza i-United States isitimela. Kuyindlela enhle uma unesikhathi esiningi sokuhamba, uma ungenayo ilayisense lokushayela lamazwe omhlaba noma uma ungafuni ukwenza impilo yakho ibe nzima nge-GPS nezikhombisi-ndlela lapho uqasha imoto. Yini enye, Uma ukhetha isitimela esizosakazwa e-United States, okuhle ukuthi ungajabulela ukubukeka okuhle komhlaba (amadlelo amakhulu, izintaba eziphakeme nemizana ebukekayo) ngenkathi uhamba kahle uhleli kahle.
E-United States, onikezela ngale nsizakalo ngu-Amtrak, umqhubi wesitimela kazwelonke oxhuma iNyakatho Melika ngohlelo lwayo lwemizila engaphezu kwengu-30 izitimela zayo ezihambela izindawo ezingaphezu kuka-500 ezifundazweni ezingama-46 naseWashington DC
Ngenxa yokuxhumana okuhlukile phakathi kwamadolobha amakhulu e-United States, uma uthatha isinqumo sokuhamba ngesitimela ungahamba ngesitimela ukuya eNew York, Philadelphia, Boston, Chicago, Washington DC, Los Angeles naseSan Francisco. Amanye amadolobha ezweni angaba nokuxhuma okuncane okuya ngandlela-thile noma ngezindlela ezimbili zokuhamba ujikeleze isikhungo.
Futhi, amadolobha amaningi ezweni anezinhlelo zezitimela zasemadolobheni ezihlala zinikeza ukuxhumana neziteshi zikaloliwe zendawo futhi zihamba phakathi kwamadolobha nezindawo ezingaphandle.
Zinjani izitimela e-United States?
Izitimela eziningi ze-Amtrak zinezihlalo ezivulekile kakhulu zokwelula imilenze yakho nokuphumula, nge-Wi-Fi yamahhala, izindlu zangasese nokudla. phakathi kwezinye izinsizakalo. Futhi, kulolo hambo olunamabanga amade kakhulu kunezinqola ezinamagumbi okulala.
Yikuphi ukuhamba okufanele kwenziwe ngesitimela e-United States?
Phakathi kwemizila u-Amtrak ayinikeza abagibeli, kunemibili, ngenxa yokuthi ihlukile, ingaba yinto ethokozisayo kakhulu ongayenza: isitimela saseCalifornia Zephyr (esilandela indlela abathungatha igolide abenza ngayo entshonalanga ngezifunda ezi-7 zezindawo ezinhle) noma isitimela iVermonter (ukubona izindawo ezinhle zaseNew England, amadolobha aso omlando namasonto aso anemibhoshongo emhlophe).
Enye yezindlela zokuhamba ezisetshenziswa kakhulu e-United States ukuhamba ezweni lonke ibhasi. Izizathu zokuyikhetha ziningi: izinkampani ezahlukahlukene ezinikezela ngale nsizakalo ngamanani azo zonke izabelomali, ukuxhumana okuhle phakathi kwamadolobha amaningi nezimoto ezihlanzekile, ezikahle neziphephile.
Iningi lamadolobha amakhulu linenethiwekhi yamabhasi ethembekile yendawo, yize insizakalo ngezimpelasonto nasebusuku ilinganiselwe.
Uma isikhathi singeyona inkinga, ibhasi kungaba yindlela ethakazelisa kakhulu yokuhlola izwe njengoba likuvumela ukuthi ubone izindawo ezikude kakhulu namathafa ahluke kakhulu okungeke kwenzeke uma ukwenze ngendiza.
Yiziphi izinkampani ezinkulu zamabhasi?
IGreyhound: yinkampani yamabhasi ebanga elide ehlanganisa imizila yezwe lonke kanye neCanada.
IBoltbus: isebenza ikakhulu endaweni esenyakatho-mpumalanga (iningi laseNew England naseNew York phakathi kwezinye izindawo).
IMegabus: le nkampani ixhuma amadolobha angaphezu kwama-50 futhi inemizila eya eCanada. Inamanani wokuncintisana impela.
IVamoose: enye yezinto ezisetshenziswa kakhulu yilabo abahamba phakathi kweWashington neNew York njalo.
Akuyona into yokuhamba esetshenziselwa ukuhamba phakathi kwamadolobha kepha endaweni efanayo. Onke amadolobha amakhulu e-United States anenqwaba yamatekisi. Ezikhumulweni zezindiza kuvame ukuba lula ukuthatha itekisi ngoba ziningi eziyisa izivakashi enkabeni yedolobha, kepha ngakolunye uhlangothi ziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi ngokuvamile akulula ukuthola ezamahhala.
Ngokuphikisana nalokho abantu abaningi abakholelwa kukho, amatekisi aseNew York awabizi kakhulu. Intengo emaphakathi yohambo olujwayelekile oludlula eManhattan ingama- $ 10 kepha uma ushesha, ngincoma ukuthi ubheke ezinye izindlela ezifana nomgwaqo ongaphansi komhlaba ngoba ithrafikhi eManhattan ingaba nesiphithiphithi futhi isiminyaminya sivame ukwakheka.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuhamba e-United States